Alcatel A5 LED -kii ugu horreeyay ee MWC 2017 | Androidsis
Alcatel waa astaan ​​caadiyan u taagan carwooyinka Abaadi. Mararka qaarkood leh natiijooyin ka wanaagsan in kasta oo kuwa kale, sida Alcatel OnTouch Xess oo ah tusaalaha astaanta, alaab si caddaalad ah aan loo dhammayn.
Sannadkan ma yaraanaynin oo soo -saaraha ayaa mar kale kala soocaya tartamayaasha kale isagoo soo bandhigaya khad qalabyo kala duwan oo aad u midab badan. Hadda waxaan kuu keennaa annaga dareenka ugu horreeya ka dib markii la tijaabiyey Alcatel A5 LED, ugu xiisaha badan aaladaha la soo bandhigay.
1 Alcatel A5 LED waa terminal runtii midab leh
2 Astaamaha farsamada ee Alcatel A5 LED cusub
Alcatel A5 LED waa terminal runtii midab leh
Kama hadlayno taleefan leh qalab aad u xoog badan, laakiin taasi waxay u taagan tahay jidh soo jiidasho leh oo ay ku jirto daboolka dambe, kaas oo ku iftiimaya midabyo kala duwan oo kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto qaabkeeda qaababka.
Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in daboolka laga saari karo, sidaa darteed waxaan beddeli karnaa batteriga, laakiin markaad qaadato daboolka waxaad ogaataa in daboolkan dambe uu ka duwan yahay, LED -yo badan oo mas'uul ka ah taabashada midabka taleefankan. Intaa waxaa sii dheer, daboolkan leh LED -yada ma aha uun wax lagu qurxiyo, wax runta ka fog ma jiraan. Waxaan dejin karnaa Alcatel A5 LED si daboolka dambe uu noogu soo wargeliyo ogeysiisyada.
Oo iska jira, kama hadlayo kaliya nalalka iftiimaya, laakiin, waxaan u mahadcelinayaa naqshadda LED ee daboolkeeda dambe, waxaan soo jiidan karnaa dhammaan noocyada qaababka. Maxaan ka helnaa ogeysiis Facebook? Waxaan arki doonaa kiiska oo ku iftiimay buluug leh F -cad.
Xaaladda Twitter -ka waxaan u arki doonnaa si la mid ah laakiin leh astaanta shabakadda bulshada halka haddii aan email ku helno Gmail aan arki doonno sida midabyadu isu beddeli doonaan caddaan iyo casaan. Waxaan xitaa habeyn karnaa taleefanka si aan u ciyaarno baararka isleegyada caadiga ah inta aan dhageysaneyno muusikada.
Astaamaha farsamada ee Alcatel A5 LED cusub
Farsamo ahaan waa taleefan meel dhexe ah, oo leh a MediaTek 6573 processor iyo 2 GB oo RAM ah oo ay weheliso 16 GB oo kaydinta gudaha ah, oo aan ku ballaarin karno kaarka micro SD -ka .. Batarigiisa 2.800 Mah waa ku filan tahay in la taageero miisaanka buuxa ee qalabka taleefankan.
La Alcatel A5 screen LED wuxuu ka kooban yahay 5.2-inch IPS panel taasina waxay gaadhay qaraar HD ah. Maaha kan ugu fiican suuqa laakiin, sida aad ku arki karto aragtideena fiidiyaha ee ugu horreysa, shaashadu waxay bixisaa waxqabad ka badan ku filan oo loogu talagalay terminal -ka kala duwan.
Kama tijaabin karno kamaradaha wax badan dhacdadan oo kale, markaa ilaa aan samayno falanqayn dhammaystiran ma bixin karno fikrad ka sii saxsan, laakiin waxaan dhahnaa mid baa fuusha. 8 megapixel camera gadaal oo lagu daray 5 megapixel camera hore. Waan jeclaaday softiweerka kaamerada maadaama ay u oggolaaneyso howlo taxane ah, sida habka maaskaro, oo sawirradeenna siin doona taabasho aad u qosol badan.
Niyad jab weyn si aad u aragto in Alcatel A5 LED wuxuu suuqa ku garaacay Android 6.0 Marshmallow. Taleefanka lagu soo bandhigo dhacdo noocan oo kale ah waa inuu la yimaadaa noocii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Google. Xaqiiqda ah in Alcatel A5 LED -kan uusan la imaan Android 7.0 Nougat waa meel aad u xun.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan xisaabta ku darsanno ilaa May ma arki doonno Alcatel A5 LED -ka dukaamada, waxaan rabaa inaan u maleeyo in muddadan ay cusboonaysiin doonaan taleefanka si uu ula yimaado Nougat. In kasta oo aan si dhab ah uga shakisanahay wax badan.
Waxa kale ee weyn ee aan ka helo waa qiimaheeda. Hagaag, waa run in taleefanku ka duwan yahay suurtagalnimada in la habeeyo guddigiisa dambe si uu kuugu ogeysiiyo LED -yadiisa farriimaha kala duwan ee aad heshaa runtii waa wax la yaab leh, laakiin marka la arko qalabka uu taleefankan casriga ahi ku xardhan yahay, in Alcatel A5 LED wuxuu ku kici doonaa 199 euro waxay iila muuqataa qiimo xad -dhaaf ah.
Adigana, maxaad u malaynaysaa Alcatel A5 LED -kan? Ma jeceshahay nidaamkeeda wargelinta LED -ga ee dhabarka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Alcatel A5 LED aragtidiisii ​​ugu horreysay ee MWC 2017
[APK] Soo degso oo rakib beta-ka ugu dambeeya ee Snapchat-ka ah ee kuu oggolaanaya inaad ku darsato tuuryo-u-ekaan kartoon u-eg xiriiriyahaaga